Mid ka mid ah xildhibannada Somaliland oo ka digay in la tarxiilo dalka kasoo jeedda Koonfurta Soomaaliya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Mid ka mid ah xildhibannada Somaliland oo ka digay in la tarxiilo...
Mid ka mid ah xildhibannada Somaliland oo ka digay in la tarxiilo dalka kasoo jeedda Koonfurta Soomaaliya
Xildhibaano ka tirsan golaha Wakiillada ee Somaliland ayaa sheegay in maamulka gobollada waqooyi uga digayaan in mar kale la tarxiilo dadka kasoo jeedda Koonfurta Soomaaliya ee ku sugan degaannada jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
Mudane Maxamad Abiib oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Wakiilada Somaliland ayaa sheegay in ceeb iyo fadeexad ay ka dhalatay dadkii sida qasabka ah looga saaray Magaalada Laascanood ee gobolka Sool.
Waxaa uu sheegay in dastuurka Somaliland ay si weyn uga soo horjeeday tilaabada ay qaaday xukuumadda Somaliland ayna halis galisay sumcaddii jamhuuriyadaasi.
Somaliland ayaa dhawaan Magaalada Laascaanood kasoo masoo furisay dad ku dhow labo kun oo ruux oo ay sheegtay in falal amni darro oo ka dhacay magaalada Laascaanood ay qeyb ka ahaayeen.
Previous articleWasaaradda tacliinta oo soo saartay lacagaha dugsiyada ee dib ufurka iskuullada ee sanad dugsiyeedka labaad
Next articleRaila Odinga oo ku baaqay in aan la dooran siyaasiyiinta musuqmaasuqa ku lugta leh